विश्वव्यापीरुपमा घट्दो जन्मदर, नया पुस्तामा ठुलो असर पर्न सक्ने – Muktinath Times
विश्वव्यापीरुपमा घट्दो जन्मदर, नया पुस्तामा ठुलो असर पर्न सक्ने
4 years ago Thursday, November 15, 2018muktinathtimes
भनिन्छ, बालबालिकाहरु देशको भविष्य हुन् । त्यसैले यदि बालबालिका नै भएनन् भने कुनै पनि देशको भविष्य खतरामा पर्न सक्छ ।
यसै खतरालाई संकेत गर्ने एक शोध अगाडि आएको छ । उक्त शोधअनुसार विश्वभरमा महिलाहरुको प्रजनन दरमा गिरावट आएको छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार यो शोधको नतिजा स्तब्ध बनाउने खालको छ र यसले मानव समाजमा गम्भिर परिणाम निम्त्याउन सक्छ । जहाँ बच्चाहरुभन्दा धेरै हजुरबुबा-हजुरआमा हुनेवाला छन् ।
शोधमा आधारित रिपोर्टले आधाभन्दा धेरै देशमा जन्मदर अस्थायी रुपमा कम भएको देखाएको छ । यसको अर्थ ती देशहरुमा जनसंख्या बढाउनको लागि पर्याप्त बच्चा छैनन् ।
‘द लान्सेट’ मा छापिएको उक्त शोधपत्रमा हरेक देशमा सन् १९५० देखि १९७० को बीच ट्रेन्डको विश्लेषण गरिएको थियो । सन् १९५० मा महिलाहरु आफ्नो पुरै जीवनमा औसत ४.७ बच्चाहरुलाई जन्म दिन्थे तर, पछिल्लो वर्षसम्म यो प्रजनन् दर आधा भएर २.४ बच्चाहरुमा आइपुग्यो ।
यद्यपी, फरक-फरक देशअनुसार यसमा धेरै अन्तर देख्न पाइन्छ । नाइजर र पश्चिमी अपि|mकामा प्रजनन दर ७.१ छ तर साइप्रसको भूमध्य द्विपमा महिलाहरुले औसतमा एक मात्रै बच्चालाई जन्म दिन्छन् ।
प्रजनन दर कम हुँदा के हुन्छ ?
जब कुनै देशमा प्रजनन दर २.१ भन्दा तल आँउछ भने त्यहाँ जनसंख्या कम हुन सुरु हुन्छ । खासगरि ती देशहरुमा जँहा बालमृत्युदर धेरै छ ।
सन् १९५० मा जब यो अध्ययन सुरु भएको थियो, त्यतिखेर कुनै पनि देश यो श्रेणीमा थिएनन् । युनिभर्सिटी अफ वासिङ्टन फर हेल्थ मेटि्रक्स एण्ड इभ्योलुसनका डाइरेक्टर प्रोफेसर क्रिस्टोफर मुरेले भने, ‘हामी त्यो स्थितीमा पुगेका छौं जहाँ प्रजनन दर रिप्लेसमेन्ट लेभलभन्दा तल छ । यसैले यदि केही गरिएन भने ती देशमा जनसंख्या कम हुनेछ, यो धेरै ठूलो परिवर्तन हो ।’
कुन-कुन देश प्रभावित हुन्छन् ?
आर्थिक रुपले विकसित देश जस्तै युरोप, अमेरिका, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियामा प्रजनन दर कम छ । तर, यसको मतबल यो होइन कि यी देशमा बस्ने मानिसहरुको संख्या कम भइरहेको छ ।
कम्तिमा पनि अहिलेसम्म त छैन किनभने यहाँ जनसंख्याको आकारमा प्रजनन् दर, मृत्युदर र प्रवासनको मिश्रण हुन्छ । प्रजनन दरमा कमीले अहिले धेरै असर पर्दैन । यसको लागि कैयौं पिँढीसम्म लगातार परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ ।
प्रोफेसर मुरे भन्छन्, ‘हामी छिट्टै त्यो स्थितीमा पुग्नेछौं जहाँ समाज जनसंख्याको कमीको कारण आइपर्ने समस्यासँग जुधिरहेको हुनेछ ।’
आधाभन्दा धेरै देशमा पर्याप्त बच्चाको जन्म भइरहेको छ तर, देश जति आर्थिक रुपले वृद्धि गर्छन् त्यति नै प्रजनन् दर कम हुँदै छ ।
प्रजनन् दर कम हुनाको कारण
प्रजनन दर कम हुने कारण स्पर्म काउन्ट कम हुनु होइन वा कुनै यस्तो सामान्य कुरा होइन जुन दिमागमा सबैभन्दा पहिले आउँछ । खासमा यसको मुख्य दुई कारण छन् ः
-गर्भनिरोधक साधनको सजिलो पहुँच
-धेरै महिलाहरु शिक्षित र जागिरे हुनु
प्रजनन दर कम हुनुलाई कैयौं पक्षबाट सफलता पनि भन्न सकिन्छ ।
रिपोर्टका अनुसार यसको समाधानका लागि आप्रवासीहरुलाई बढाउन सकिन्छ । तर, त्यसको आफ्नै समस्याहरु हुन सक्छन् । यस बाहेक उनीहरुले आफ्नो देशका महिलाहरुलाई धेरै बच्चा पैदा गर्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।
रिपोर्टका लेखक प्रोफेसर मुरे भन्छन्, ‘वर्तमान रुझानअनुसार गइरहेको खण्डमा धेरै देशहरुमा एकदम कम बच्चाहरु हुनेछन् र जनसंख्यामा ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका धेरै मानिसहरु हुन्छन् । यसले वैश्विक समाजलाई सन्तुलिन बनाउन धेरै मुस्किल हुनेछ । यस्तो समाजको गहन सामाजिक र आर्थिक परिणामहरुको बारेमा सोच्नुहोस् जहाँ बच्चा कम र वृद्धवृद्धा धेरै छन् ।’
‘जापान जोखिममा छ । उनीहरुको जनसंख्या कम भइरहेको छ । पश्चिमी देशहरु यसबाट धेरै प्रभावित हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ किनभने प्रजनन दरको कमी प्रवासनबाट भरपाइ हुन्छ ।’
रामबहादुर बम्जनको आश्रममा सिलबन्दी
सानिमा बैंककाे लाभांश प्रस्ताव,१७ प्रतिशत बोनस शेयर दिने
‘सेन्टी भाइरस’ले गर्यो पहिलो दिनमै आक्रामक व्यापार
शृङ्खलाबद्द सिरिन्ज आक्रमणको आशंकामा एक व्यक्ति पक्राउ